Turkiga oo bilaabay talaalka shanaad ee hargabka Karoona - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Turkiga oo bilaabay talaalka shanaad ee hargabka Karoona
Ayadoo aduunku badankiisa uu welli la tacaalayo qaybta labaad ee talaalka hargabka Karoona ayaa Turkigu bilaabay qaybtii shanaad ee hargabka Karoona. ”Waxaan ugu baaqaynaa in dadka difaaca jirkoodu diciif yahay ay qaaataan talaalka shanaad ee hargabka Karoona ayay tiri wasaarada caafimaadku.
Turkiga ayaa bilaabaya dhisida xarun lagu baaro cudurada iyo soo saarista daawooyin kala duwan taas oo dalku ka heli karo balaayiin doolar hadday ku guulaystaan kadib markii ay soo saareen daawada Karoona ayan u bixiyeen Turkovac.
Yuhuuda ayaa iyaduna iclaamisay inay bilaabayso talaalka afraad. Halka reer Falastiin RABI u nicmeeyay oo ay aad u yartahay dadka u dhimanaya hargabka Karoona xitaa iyadoo Yuhuuda cunaqabatayn ku hayso.